Oololiwe Free Le Summer For Abafikisayo | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Oololiwe Free Le Summer For Abafikisayo
Okokuqala, khona apho kuya kubakho oololiwe simahla kuze 30,000 abatsha kweli hlobo. Inani amatikiti zipalini singeze kuxhomekeka ekubeni ikho na imfuno. I-EU isebe yabhengeza ukuba iza kwenza umnikelo ifumaneke elivisayo kweminyaka 18 nangaphantsi. Ngenxa inani amatikiti etreyini free, ixabiso le EU ukuze ngaphezu 12 million neekhilogram.
EU ezifundisa trains ezamahala kweli hlobo.
Kutheni ukunika kude amatikiti oololiwe free?
in 1972 kwizikhululo zikaloliwe eYurophu baba zizele abantu abatsha ehlotyeni. ngenxa moya usahlala imali eninzi kakhulu ngeli xesha, $38 ukuba lokuphumelela kaloliwe a eYurophu wayebonakala enomtsalane. Ngaphezu, oololiwe ebusuku wenza ukuba zokulala ezingabizi kakhulu. kwakhona, abaphumelela loliwe zibandakanya zonke Western Europe. in 1998 Ezingxingweni uloliwe apho de ngoko zibe phantsi ifumaneka kuphela kubantu 26 ukuba lo kweminyaka isusiwe. I-Interrailing yayingasathandwa kangako, kwaye amazwe aqala ukudwelisa amaxabiso abo kubakhenkethi besebenzisa inkonzo yabo yoololiwe. Ngaphezu, moya eqolo ke waba ekhoyo eshiya kusala interrailing njengento ndlela ebiza nokungaphumeleli ukuya eYurophu. Ngoku iPalamente yaseYurophu igqibe kwelokuba ifuna ukuphinda iqalise ukusebenzisana njengezinto ezithandwayo kulutsha kwaye yabelwe 12 million neekhilogram yeprojekthi.
Ukuze ube nokufaka isicelo enye amatikiti free, kufuneka uthumele isicelo sakho kule European Youth Portal ngoJuni. Iqela labagwebi ke ukwaba 15,000 amatikiti etreyini asimahla. Nangona Iseti yesibini 15,000 amatikiti liye Icetywe ekugqibeleni siyakuba kuxhomekeke mali kunye nengxelo evela kuqala 15,000 nxaxheba. Imihla ngqo lokungenisa liya kuba phakathi kuJuni 12 noJuni 26. Uvumelekile ukuba isicelo itikiti ukuba uya kuba 18 iminyaka yobudala ngo Julayi 1. 1900 bebonke ezamahala amatikiti aya kwabelwa izicelo British. Ngokufanayo, Fransi yaye Jemani will also receive 1900 amatikiti. Okuchasene, Irish applicants will only receive 140 amatikiti.
Prague ku Berlin Uqeqesha
Ukuze kuqwalaselwa phakathi izicelo kakhulu koololiwe free kufuneka sibonise oku kulandelayo;
Okokuqala, Inkuthazo yakho yokundwendwela ubuncinci isiza esinye seLifa leMveli laseYurophu. Ngaphezu, Kuya kufuneka uphendule imibuzo malunga nendawo yeLifa leMveli yeNkcubeko yaseYurophu. Imibuzo iya kubandakanya nemibuzo malunga nolutsha kunye nolonyulo lwePalamente yaseYurophu.
Ngaphezu, you will need to express a desire to become a DiscoverEU ummeli-lizwe. Lo mnqweno kufuneka ibandakanye ingxelo yakho amava zokuhamba yaye ngokwenza iifoto zakho available to DiscoverEU anniversary photo exhibition at the European Parliament.
Isikhululo senqwelomoya saseLyon ukuya koololiwe abahle baseNice
Incwadi ingenandleko Amatikiti ezikhoyo ngololiwe nathi
Ngenxa yokuba siyazi ukuba ufuna ixabiso okusemandleni ukuba ungafumani amatikiti oololiwe free, siye wasinika search engine fast ukufumana amatikiti etreyini cheap ngokukhawuleza. Sifuna ukuba ukuhamba ngakumbi uze uhlawule ngaphantsi. Amatikiti Ukuthengwa uloliwe usebenzisa iindlela intlawulo ezininzi kuquka Card Credit, PayPal, and Alipay. Whether you are looking for ubuhle bendalo, Ukutya okuhle, uhambo zothando okanye nasiphi na esinye isizathu sokuba aye eYurophu, sinako kukunika itikiti best.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffree-trains-summer-teens%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
#free #freetrains itikiti train tips uloliwe